ZCashDarkCoin စျေး - အွန်လိုင်း ZECD ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ZCashDarkCoin (ZECD)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ZCashDarkCoin (ZECD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ZCashDarkCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ZCashDarkCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ZCashDarkCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZCashDarkCoinZECD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000004ZCashDarkCoinZECD သို့ ယူရိုEUR€0.000003ZCashDarkCoinZECD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000003ZCashDarkCoinZECD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000004ZCashDarkCoinZECD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00004ZCashDarkCoinZECD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00002ZCashDarkCoinZECD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00009ZCashDarkCoinZECD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00001ZCashDarkCoinZECD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000005ZCashDarkCoinZECD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000005ZCashDarkCoinZECD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00009ZCashDarkCoinZECD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00003ZCashDarkCoinZECD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00002ZCashDarkCoinZECD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.000292ZCashDarkCoinZECD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.000657ZCashDarkCoinZECD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000005ZCashDarkCoinZECD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000006ZCashDarkCoinZECD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.000122ZCashDarkCoinZECD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00003ZCashDarkCoinZECD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.000412ZCashDarkCoinZECD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.00463ZCashDarkCoinZECD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0015ZCashDarkCoinZECD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.000287ZCashDarkCoinZECD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.000108
ZCashDarkCoinZECD သို့ BitcoinBTC0.0000000003 ZCashDarkCoinZECD သို့ EthereumETH0.00000001 ZCashDarkCoinZECD သို့ LitecoinLTC0.00000007 ZCashDarkCoinZECD သို့ DigitalCashDASH0.00000004 ZCashDarkCoinZECD သို့ MoneroXMR0.00000004 ZCashDarkCoinZECD သို့ NxtNXT0.000283 ZCashDarkCoinZECD သို့ Ethereum ClassicETC0.0000006 ZCashDarkCoinZECD သို့ DogecoinDOGE0.00115 ZCashDarkCoinZECD သို့ ZCashZEC0.00000004 ZCashDarkCoinZECD သို့ BitsharesBTS0.000149 ZCashDarkCoinZECD သို့ DigiByteDGB0.000134 ZCashDarkCoinZECD သို့ RippleXRP0.00001 ZCashDarkCoinZECD သို့ BitcoinDarkBTCD0.0000001 ZCashDarkCoinZECD သို့ PeerCoinPPC0.00001 ZCashDarkCoinZECD သို့ CraigsCoinCRAIG0.00176 ZCashDarkCoinZECD သို့ BitstakeXBS0.000164 ZCashDarkCoinZECD သို့ PayCoinXPY0.00007 ZCashDarkCoinZECD သို့ ProsperCoinPRC0.000483 ZCashDarkCoinZECD သို့ YbCoinYBC0.000000002 ZCashDarkCoinZECD သို့ DarkKushDANK0.00124 ZCashDarkCoinZECD သို့ GiveCoinGIVE0.00834 ZCashDarkCoinZECD သို့ KoboCoinKOBO0.000873 ZCashDarkCoinZECD သို့ DarkTokenDT0.000004 ZCashDarkCoinZECD သို့ CETUS CoinCETI0.0111
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 23:55:02 +0000.